विप्लव प्रतिबन्धप्रति नेकपा मकवानपुरका नेताले दिए यस्तो प्रतिक्रिया - Khabar Break | Khabar Break
विप्लव प्रतिबन्धप्रति नेकपा मकवानपुरका नेताले दिए यस्तो प्रतिक्रिया
हेटौँडा,२९ फागुन ।
सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई आपराधिक संगठनको नाम दिँदै प्रतिवन्ध लगाएपछि अहिले यसको चर्चा परिचर्चा सुरु भएको छ । यसै सन्र्दभमा नेकपा मकवानपुरका केहि नेताहरुसँग खबरब्रेक डटकमले प्रतिक्रिया लिएको छ । प्रतिक्रिया दिने नेताहरुले प्रतिवन्धको विषयमा ठिक र बेठिक भन्ने मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
प्रतिवन्ध भन्दा वार्ता आवश्यक थियो : मुनु सिग्देल
सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई अहिलेनै प्रतिवन्ध लगाउने समय भएको थिएन । प्रतिवन्ध भन्दा पनि वार्ता गर्दा राम्रो हुने थियो । वार्तामा ल्याउँदै सहज वातावरण बनाएर उनीहरुलाई मुलधारको राजनीतिमा ल्याउनु पर्ने समयमा सरकारको निर्णयले राम्रो म्यासेज दिएन । उनीहरुलाई प्रतिवन्ध नलगाउदा पनि कानुन विपरित काम भकै थिए अब उनीहरुलाई त्यस्तो काम गर्न झन सहज हुन्छ । अब लुकेर प्रहार गर्ने बाटो खुलेको छ । गणतन्त्रमा यो समाधानको उपाय हैन ।
जत्न जाने बेलामा शंख फुकेर हुँदैन : प्रेमबहादुर पुलामी “छिन्तु”
सरकारले र विप्लव समुह दुबैले यो बेलामा समृद्धिमा मात्र ध्यान दिनु पर्ने हो । देश समृद्धिको दिशामा अघि बढेको समयमा विप्लवले पनि दंगा फसाद गर्ने बेला हैन, अनि सरकारले पनि प्रतिवन्ध लगाईहाल्ने बेला पनि हैन, सच्यउनुपर्छ, विप्लवहरु पनि क्रान्ति भनेर बरालिने पनि बेला हैन, जघन्य अपराध सम्म भाको छ, दोषी उपर कारबाही हुन्छ। मान्छेलाई आतंकित बनाउने काम छोडनुपर्छ । जन्ती जाने बेलामा शंख फुक्नु भएन, यो बेला समृद्धिमा लाग्नुपर्छ ।
विप्लवहरुले के को लागि आन्दोलन गर्दैछन ? : श्रीधर पोखरेल
सरकारले गरेको निणर्य राम्रो छ । वम पड्काउने, चन्दा उठाउने अनि राजनीति दल भन्न मिल्छ । देशमा गणतन्त्र आएको छ, जन निर्वाचित प्रतिनिधिहरु छन, देशमा विकासको लहर सुरु भएको छ अनि विप्लवले के को लागि आन्दोलन गरेको त ? नितान्त आतंक फैल्याउने काम गर्नेलाई सरकारले प्रतिवन्ध नलगाए के गर्ने त ? राजनीति पार्टीले त चुनावमा आउनुपर्छ, जनताबाट अनुमोदित हुनुपर्छन नि । नेपालमा सबै कम्युनिष्ट एक भएर समाजवादतर्फ अघि बढने समयमा आतंक फेल्याउँदै हिडन भएन नि ।
सरकारले यति हतार गर्नु हुदैनथ्यो : रामनारायण विडारी
सरकारले यति हतार नगरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । अपराध गरेका अपराधिहरुलाई कारबाही गर्नुपर्छ तर पार्टीलाई प्रतिवन्ध लगाउने काम राम्रो हैन । संविधानमा पनि पार्टीलाई प्रतिवन्ध लगाउन नपाउने ब्यवस्था छ । क्याविनेटले विप्लवलाई आपराधिक समुह घोषणा गरेर प्रतिवन्ध लगाएको छ तर यसो गर्न पनि मिल्दैन । तर विप्लवको आपाराधिक गतिविधि रोक्न चै सरकार लाग्नुपर्छ ।